Jwxo-shiil, oo Qaxootinimo ka Codsaday Dalka Australia – Rasaasa News
Aug 5, 2011 Jwxo-shiil, oo Qaxootinimo ka Codsaday Dalka Australia
Wellington, Aug 5, 2011 [ras] – War naga soo gaadhay dalka New Zealand, ayaa sheegay in Mohamed Omar Osman [Jwxo-shiil], oo badalay magaciisii uu ka codsaday Qaxootinimo magaalada Wellington ee dalka New Zealand, xili ay socdaan arimo badan oo lid ku ah Jwxo-shiil, lagana yaabo in uu xabsi u galo isaga oo cimri ah.
Qodobka ugu muhiimsan ee xiligan ku kalifay Jwxo-shiil, in uu qaxootinimo ka codsado dal yar oo aan siyaasad shaqo ku lahayn, oo ay degan yihiin dad yar oo Somali ah. Kooxda Jwxo-shiil, ee dhibaatada ka waday degaanka Somalida Ethiopia, waxaa waday beesha uu ka dhashay Jwxo-shiil. Beeshu wax is fahamsiin badan ka dib, waxay ogaatay in dhibaato, tol la,aaneed iyo magac xumo mooyee ayna wax wanaag ah ka helayn Jwxo-shiil. Waxayna beeshu go,aan ay u dhantay ku qaadatay magaalad Dhagaxbuur.
Waxaana dhab ah in hadii ay joogjiso beesha reer Isaaq taageerada ay siiso kooxda Jwxo-shiil, in ayna jirayn kooxdu bil, arintaas Jwxo-shiil, aad buu ula socdaa. Go,aanka beesha reer isaaq waa midka kowaad ee ku kalifay Jwxo-shiil, in uu xiligan dal cusub ka codsado Qaxootinimo.
Qodobka labaad ee Jwxo-shiil, ku kalifay in uu xiligan qaxootinimo ka codsado New Zealand, waa arimaha argagixisnimo ee ay dawlada Ethiopia ku dartay isaga iyo kooxdiisaba. Ethiopia ayaa dalalka reer galbeedka u gudbisay arimo khatar ah oo isugu jira qoraalo, maqal iyo muuqaal ah. Arimahaas oo ah kuwa ay suurto galtahay in Jwxo-shiil, loo dhaadhiciyo xarunta maxkamada Aduunka ee Hague.
Labadaas qodob, oo uusan xiligan Jwxo-shiil, haysanin meel uu ka maro, ayaa keenay in uu isku aamini waayo dalkii uu hore u deganaa.
Waxaa isweydiin leh hadii sharci laga siiyo New Zealand iyo hadii aan laga siinba in uu dambiile yahay, dambiilana uusan dhuuman karin aduunka maanta.
Is dhiibida Jwxo-shiil, ayey la socdaan xubno kooban oo kooxdiisa ah, kuwaas oo iyaga laftigoodu aan xaga dambiga waxba dhaamin.
Sida ay wararku sheegayaan, Jwxo-shiil, waxaa uu ku laaban doonaa dalka Ingriiska kolka ay u dhamaato nidaamka qaxootinimadu.
Waxaa na loo sheegay in Mr Qaaxo uu u raacay New Zealand, waxaanu isku dayeeynaa in aan soo helo magaca uu Jwxo-shiil, qaxootinimada ku codsaday iyo hadii uu ku weheliyo arintaas Mr Qaaxo.